သတင်း - မျောက်ကျောက်ရောဂါအတွက် သင်အစိုးရိမ်ဆုံးမေးခွန်း ၁၁ ခုအတွက် အဖြေများ
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အစီရင်ခံစာများ အရ ယခုအချိန်အထိ မျောက်ရောဂါကူးစက်မှုသည် အာဖရိကအပြင်ဘက်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး ပြင်ပကမ္ဘာမှ သတိနှင့် စိုးရိမ်မှုတို့ကို နှိုးဆော်ထားသည်။မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် မျိုးပြောင်းနိုင်ပါသလား။ကြီးကြီးမားမား ကပ်ရောဂါ ရှိလာမှာလား။ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးသည် မျောက်ကျောက်ရောဂါ ကူးစက်မှုကို ထိရောက်စွာ တိုက်ဖျက်နိုင်ဆဲ ရှိပါသလား။
Monkeypox သည် 1958 ခုနှစ်တွင် ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်မျောက်များတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် အာဖရိကအလယ်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းရှိ မိုးသစ်တောများတွင်ဖြစ်သည်။
မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပြီး အနောက်အာဖရိက ကလိတ်နှင့် ကွန်ဂိုမြစ်ဝှမ်း (အာဖရိကအလယ်ပိုင်း) ကလိတ်များ ရှိသည်။မျောက်ရောဂါကူးစက်မှု ပထမဆုံးလူသားကို ကွန်ဂို (DRC) တွင် ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ- အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာ (CDC) မှ ၂၀၀၃ အီလက်ထရွန် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးရုပ်ပုံသည် မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အမှုန်အမွှားတစ်ခုကို ပြသသည်။
2. မျောက်ကျောက်ရောဂါသည် မည်သို့ကူးစက်နိုင်သနည်း။
မျောက်ကတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။လိင်ဆက်ဆံမှု၊ ခန္ဓာကိုယ်အရည်များ၊ အရေပြားထိတွေ့မှု၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အမှုန်အမွှားများ, သို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ပါ။ အိပ်ယာနဲ့ အဝတ်အစားလိုမျိုး။
Monkeypox မှတဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ရောဂါပိုးရှိသောတိရစ္ဆာန်များနှင့်ထိတွေ့ မျောက်များ၊ ကြွက်များနှင့် ရှဥ့်များကဲ့သို့သော။
၃။ မျောက်ကျောက်ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Monkeypox သည် အနီကွက်များ ပေါက်လာပြီး အဖုများ ပြည့်လာကာ အနီကွက်များ ထွက်လာသည်။ရောဂါပိုးရှိသူများသည် အဖျားတက်ခြင်း နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲခြင်းကိုလည်း ခံစားရသည်။
ရောဂါလက္ခဏာများသည် အများအားဖြင့် ကူးစက်ပြီး6ရက်မှ 13 ရက်အတွင်း ပေါ်လာတတ်သော်လည်း သုံးပတ်အထိ ကြာနိုင်သည်။ဖျားနာမှုသည် နှစ်ပတ်မှ လေးပတ်အထိ ကြာနိုင်ပြီး ကလေးများတွင် ပြင်းထန်သောရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ဟု WHO က ဆိုသည်။
4. မျောက်ကျောက်ရောဂါ သေဆုံးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။
မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေသည် ၎င်း၏အလားတူ ဗိုင်းရပ်စ် variola virus ထက်နည်းသော်လည်း ၎င်းသည် သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။သေဆုံးနှုန်း 1% မှ 10% ရှိသည်။ယခုအချိန်အထိ ရောဂါအတွက် ထိရောက်သော ကုသမှု မရှိသေးပါ။
ဓာတ်ပုံ- WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus။ဓာတ်ပုံ-တရုတ်သတင်းအေဂျင်စီ-ထားဝယ်သတင်းထောက် ဖုန်ကြားရှင်
5. ဒီနှစ်မှာ အမှုပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
မျောက်ကျောက်ရောဂါသည် အာဖရိကအပြင်ဘက်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံသို့ ပျံ့နှံ့သွားကြောင်း WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus က ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ဥရောပ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျနှင့် အစ္စရေးတို့တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၈၀ ကျော်ကို အတည်ပြုထားသည်။
အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဗဟိုဌာန (CDC) က မျောက်ကျောက်ဟု သံသယရှိသူ လေးဦးကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးမှာ အမျိုးသားများဖြစ်ပြီး ခရီးသွားလာမှုနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း သိရသည်။ဥရောပတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် မျောက်ကျောက်ရောဂါအသစ် ၃၆ ဦးရှိခဲ့ပြီး ထိုနေ့တွင်ပင် ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ စကော့တလန်တွင် ပထမဆုံးသောမျောက်ရောဂါတွေ့ရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်း စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ ၅၇ ဦးအထိ တိုးလာခဲ့သည်။
6. မျောက်ကျောက်ရောဂါ အကြီးစားဖြစ်ပွားနိုင်ပါသလား။
New York Times သည် ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် မျောက်ကျောက်သည် ကြီးမားသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆီသို့ ဦးတည်ခြင်းမရှိဟု ယုံကြည်သည်။အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပွားမှုသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသော မြက်ခင်းပြင်ခွေးများနှင့် အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ထိတွေ့မှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားမှုအများစုမှာ လူငယ်များတွင် ဖြစ်ပွားသည်။WHO ကူးစက်ရောဂါကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Heiman က နိုင်ငံအသီးသီးတွင် လက်ရှိမျောက်ကျောက်ကပ်ရောဂါသည် "ကျပန်းဖြစ်ရပ်" ဖြစ်ပြီး၊ ယခုတစ်ကြိမ်ကူးစက်မှု၏ အဓိကလမ်းကြောင်းမှာ စပိန်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံတွင် ကျင်းပသည့် ပါတီနှစ်ခုတွင် မလုံခြုံသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်နိုင်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။
7. မျောက်ကျောက်သည် မျိုးပြောင်းပါသလား။
WHO ၏ “ကျောက်ရောဂါ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့” အကြီးအကဲ လူးဝစ်က ၂၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် ပြောင်းလဲသွားကြောင်း အထောက်အထားမရှိပါ။ဗိုင်းရပ်စ် ကူးဆက်နိုင်ခြေ နည်းပါးကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။
WHO မှ ကူးစက်ရောဂါဗေဒပညာရှင် Van Kerkhove ကလည်း ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကတွင် မကြာသေးမီက သံသယရှိပြီး အတည်ပြုလူနာများသည် မပြင်းထန်ကြောင်းနှင့် လက်ရှိအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဟု WHO မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ- US ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာနမှ ပံ့ပိုးပေးသော အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးပုံများသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသော မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ် (ဘယ်ဘက်) နှင့် အရွယ်မရောက်သေးသော ဗိုင်းရပ်စ် (ညာဘက်) ကို ပြသထားသည်။
8. ကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးသည် မျောက်ကျောက်ရောဂါကူးစက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါသလား။
ဘီဘီစီ၏အဆိုအရ ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးသည် မျောက်ကျောက်ရောဂါကို ကာကွယ်ရာတွင် 85% ထိရောက်ကြောင်းပြသထားပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ New South Wales တက္ကသိုလ်မှ ကူးစက်ရောဂါ သိပ္ပံပညာရှင် Rena McIntyre က ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို အကြီးစား ဆိုင်းငံ့ထားရခြင်းမှာ နှစ် 40 မှ 50 အတွင်း ဖြစ်သောကြောင့် ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး၏ ခုခံအား ကျဆင်းသွားကြောင်း လေ့လာမှုများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ မျောက်ကျောက်ကပ်ရောဂါ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။exacerbation ၏အကြောင်းရင်း။သူမသည် မျောက်ကျောက်လူနာများနှင့် ဆက်စပ်နေသော အဆက်အသွယ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် မျောက်ကျောက်ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အာဏာပိုင်များကို အကြံပေးခဲ့သည်။
၉။ နိုင်ငံအတော်များများက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ။
CDC မှ တာဝန်ရှိသူ McQueston မှ အေဂျင်စီသည် ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး အသုတ်လိုက် ထုတ်ပေးနေပြီး မျောက်ကျောက် လူနာများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြင်းထန်သော ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အန္တရာယ် မြင့်မားသော အုပ်စုများနှင့် အနီးကပ် ထိတွေ့မှုကို ဦးစားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း CDC မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 23 ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။UK Health Security Agency သည် အန္တရာယ်များသော အုပ်စုများအတွက် ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကိုလည်း အကြံပြုထားသည်။
ပေါ်တူဂီရှိ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၏ ဒါရိုက်တာ Freitas က ရောဂါပိုးရှိသူနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့သူများကို သီးခြားခွဲထားရန် လိုအပ်ပြီး အခြားသူများနှင့် အဝတ်အစားများနှင့် ပစ္စည်းများကို မျှဝေခြင်းမပြုရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ဘယ်လ်ဂျီယံသည် မျောက်ကျောက်ရောဂါကူးစက်မှုများအတွက် ၂၁ ရက်ကြာ သီးခြားခွဲထားရန် အမိန့်ပေးထားသည်။
ဂျာမနီ၏ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအေဂျင်စီဖြစ်သော Robert Koch Institute သည် အတည်ပြုလူနာများနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့သူများကို သီးခြားခွဲထုတ်ရန် အကြံပြုထားခြင်းရှိမရှိအပါအဝင် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးအကြံပြုချက်များကို သုတေသနပြုလုပ်နေပြီး မည်သူက ကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အကြံပြုထားကြောင်း သိရသည်။
WHO မှ အကြံပြုထားသည်မှာ ခရီးသွားစဉ် သို့မဟုတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်နေထိုင်သည့်နေရာများမှ ပြန်လာချိန်တွင် မည်သည့်ရောဂါများကိုမဆို ကျန်းမာရေးပညာရှင်များထံ အစီရင်ခံတင်ပြသင့်သည်။
ဆပ်ပြာနှင့် ရေ သို့မဟုတ် အရက်အခြေခံ လက်သန့်ဆေးရည်ဖြင့် လက်သန့်ရှင်းရေးကို အသိအမှတ်ပြုရန် အရေးကြီးကြောင်း WHO မှလည်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါသည် အဓိကအားဖြင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရှိ အမှုန်အမွှားများနှင့် အကျိအချွဲများ ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သောကြောင့် သိရှိရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ PCR nucleic acid test နှင့် အလွန်ဆင်တူပါသည်။COVID-19.မျောက်ကျောက် ဗိုင်းရပ်စ် နူကလိစ်အက်ဆစ် ထောက်လှမ်းသည့်ကိရိယာ (PCR-fluorescent စူးစမ်းလေ့လာနည်း) ကို အသုံးပြုပါ။
Monkeypox virus သည် လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များတွင်ဖြစ်စေ မျောက်ကျောက်ရောဂါဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်။
Monkeypox virus သည် အခြားသော ဗိုင်းရပ်စ်များ ပါ၀င်သော မိသားစု Poxviridae ၏ မျိုးရင်း တစ်ခု ဖြစ်သည် ။
နို့တိုက်သတ္တဝါများကို ပစ်မှတ်ထားသော မျိုးစိတ်များ။ဗိုင်းရပ်စ်ကို အလယ်ပိုင်းနှင့် အပူပိုင်းမိုးသစ်တောဒေသများတွင် အဓိကတွေ့ရှိရသည်။
အနောက်အာဖရိက။ရောဂါကူးစက်မှု၏ အဓိကလမ်းကြောင်းမှာ ရောဂါပိုးရှိသော တိရစ္ဆာန်များနှင့် ထိတွေ့ခြင်းဟု ယူဆကြသည်။
၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အရည်များ။ ဂျီနိုမ်တွင် အပိုင်းမခွဲထားဘဲ မျဉ်းသားသော မော်လီကျူးတစ်ခုပါရှိသည်။
ကြိုးနှစ်ထပ် DNA၊ ၁၈၅၀၀၀ နျူကလိယအလျားရှည်။
စျေးကွက်ရှိ PCR-fluorescent probe နည်းလမ်း၏ ထောက်လှမ်းခြင်းအဆင့်သည် အများအားဖြင့် မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်၏ DNA ကို ဦးစွာထုတ်ယူပြီး သန့်စင်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် PCR တုံ့ပြန်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။Foregene ၏ ထိပ်တန်း Direct PCR နည်းပညာကို အသုံးပြုပါက၊ မျောက်ကျောက် DNA ထုတ်ယူခြင်း၏ ပြင်းထန်သော အဆင့်များကို ချန်လှပ်ထားနိုင်ပြီး မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိ DNA ကို နမူနာထုတ်သည့် အေးဂျင့်မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး PCR တုံ့ပြန်မှုကို တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။အဆင်ပြေမြန်ဆန်!
အချိန်နှင့်တပြေးညီ PCR အစုံ-Taqman
နမူနာ ဖြန့်ချိရေး ကိုယ်စားလှယ်
စာတိုက်အချိန်- မေလ ၂၇-၂၀၂၂